Mba aiza ho aiza moa izany izao ry Jean ny momba an’ilay baomba teny Mahamasina ? Mba manao ahoana ny mikasika an’ilay volamena 24 kg tratra teny Ivato ? Ahoana ihany koa no hiafaran’ilay aferan’i Dinina be tamin’ilay sera 390 tapitrisa ariary ? Toa homenareo ny pasy tolaka sy ny samy variana foana mantsy izahay ry Jean an ! Sao dia mihevitra ary ianareo hoe efa adinonay ireny matoa izahay mangina ? Miandry izay vokatra avy aminareo izahay fa aza diso hevitra a ! Izahay mihitsy angamba no adala fa matoa mantsy tsy hapoitranareo ny marina dia misy raha ao. Ianareo kosa moa ve dia hamatotra ny tenanareo sy akama ka hanimba ny fihinananareo amin’izay famoahana ny marina ? Dia mbola ho tratran’ny samy variana ihany koa izany izahay amin’io sera be azo tany Paris io. Tsaboy aloha ny tenanareo ry Jean fa efa mikoriana ao anatin’ny ranareo mihitsy ilay aretina “Tsy mahalala onona” a ! Izahay efa manana mpitsabo fa fotoana sisa andrasana e !